Artemisa - nnukwu uru ahụike ya | Bezzia
Susana godoy | 18/06/2022 14:00 | Udo
Dị ka anyị maara nke ọma, e nwere ọtụtụ ihe ọkụkụ na-enyere anyị aka kwa ụbọchị na nnukwu uru ha. Ọfọn, na nke a, a gaghị ahapụ anyị mgbe anyị kpọtụrụ aha Atemis. N'ezie, ọ bụrụ na ị maghị ya n'aha a, ikekwe ọ na-ada ka ị maara nke ọma ma ọ bụrụ anyị na-agwa gị na a na-akpọkwa ya wormwood ma ọ bụ St. John wort.
Ikekwe ugbu a, ị ghọtarala ụdị osisi anyị na-ekwu maka ya. Ee, o nwere ọtụtụ uru ahụ ike ihe ị kwesịrị ịma Tụkwasị na nke ahụ, ha niile laghachiri ọtụtụ afọ, n'ihi ịdị irè ahụ anyị kwuru okwu ya. Yabụ, anyị agaghị enye ya echiche karịa ma anyị ga-achọpụta ihe omume ọma ndị ahụ bụ.
1 Mugwort na-enyere gị aka ịkwụsị ibu
2 Na-ebelata ihe mgbu nke ịhụ nsọ
3 Ị ga-ahapụ n'azụ ịdị arọ nke afọ
4 ị ga-echefu ihe mgbu
5 Kedu ka m ga-esi were osisi a
Mugwort na-enyere gị aka ịkwụsị ibu
N'ezie, ị na-achọ ụzọ kachasị mma isi wepụ ụfọdụ kilo. Ị maraworị na ọ bụghị okwu ịkwụsị iri nri kama ọ bụ iwebata nri ka mma. Yabụ, dị ka ihe mgbakwunye na nri ndị ahụ bụ isi nke ụbọchị, anyị ga-enweta nnukwu enyemaka nke osisi Artemisa. N'ihi na n'ime uru ndị a na-ekwukarị, nke a bụ otu n'ime ndị bụ isi. Ọ na-enyere gị aka ifelata n'ihi na ọ bụ osisi na-asachapụ. Ihe ị ga-eme nke ahụ ga-adị mma iji detoxify ahụ. Ị maraworị na site na nri diuretic, ị ga-ezere njide mmiri na n'ozuzu, ị ga-enwe mmetụta dị mma karị.
Na-ebelata ihe mgbu nke ịhụ nsọ
Ụmụ nwanyị ndị na-enwe ahụ mgbakasị ahụ siri ike kwa ọnwa ga-ama ihe anyị na-ekwu. N'ihi na na mgbakwunye na ịbụ oke na-egbu mgbu, na anyị amaghịdị ka e si eyi uwe, ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-achọta ezigbo ngwọta iji mee ka obi dajụọ ha. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ nzọ na ọgwụgwọ eke, Artemis ga-anọnyere gị. Ị ga-ahapụ n'azụ colic nke oge ma ọ bụkwa na ọ ga-edozi ya. Na-echefughị ​​nke ahụ kwa, ekele ya, ị ga-enwekwu eruba. Yabụ, maka ihe a niile, ịkwesịrị ịnwale ya. Ị naghị eche?
Ị ga-ahapụ n'azụ ịdị arọ nke afọ
Enwere ọtụtụ nsogbu afọ anyị nwere ike ịnwe ụbọchị niile. Otu n'ime ndị na-emekarị nwere na mgbaze. Ịdị arọ ahụ nke na-apụta mgbe nri gasịrị bụ ihe na-akpasu iwe. N'otu aka ahụ, nrụpụta gas ma ọ bụ ọbụna reflux Ha na-egosi na mgbari nri agbasoghị usoro ọ na-emekarị. Ya mere, iji nyere ya aka na n'ụzọ okike, ọ ga-abụkwa osisi a ka anyị ga-eburu n'uche. N'ihi na ọ na-ebelata ihe mgbaàmà ndị a niile n'ihi ọrụ nchacha ya.
ị ga-echefu ihe mgbu
Ọ bụ ezie na tupu anyị ekwuo ihe mgbu nke ịhụ nsọ, ugbu a, anyị na-alaghachi na mgbu ma na-ezo aka na nkwonkwo. Ịhịa aka n'ahụ na obere mmanụ Artemis ga-enye gị ahụ efe ị chọrọ. n'ihi na kwa nwere calming Njirimara. Yabụ, oge eruola ịhapụ onwe gị site na ngwọta okike dị ka nke a iji belata oke mgbu ndị ahụ na-adịghị enye gị ohere ịga n'ihu kwa ụbọchị.
Kedu ka m ga-esi were osisi a
Mgbe ịhụchara uru ndị bụ isi, ị ga-eche ka ị ga-esi were ya malite ịhụ uru ndị ahụ. Ọfọn, ọ dị nnọọ mfe n'ihi na ị nwere ọtụtụ ụzọ. N'otu aka ahụ ị nwere ike were ya n'ụdị infusion karịsịa mgbe ọ bụ ịgwọ mgbu mgbu nke anyị kwurula. Mana dịka ọmụmaatụ, iji belata mgbu nkwonkwo, ị nwekwara ike ịme ịhịa aka n'ahụ na mmanụ Artemis. Na mgbakwunye na infusion na mmanụ, ị ga-ahụ ya n'ụdị ntụ ntụ, ma ọ bụrụ na ị na-eji ya otú a, gbalịa ka ị ghara gafere 3 grams kwa ụbọchị. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mma maka ndị inyom dị ime ma dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, ọ dịghị ewute na ị ga-aṅụ ya, kpọtụrụ dọkịta gị mgbe ị nwere ọrịa ndị ọzọ na ndị agadi ma ọ bụ na-ewere ọgwụgwọ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Udo » Mugwort: nnukwu uru ahụike ya
Ihe achọrọ na agụmakwụkwọ ụmụaka